Ọ bụ eziokwu na backlinks dị na gburugburu ugbu a bụ goldmine?
Ọ bụrụ na ndị na-ejikọta ihe ndị dị na nsụgharị dị na ya, ha nwere ike ịbụ ihe kachasị mkpa na njikọ nke njikọ na njikwa Search engine (SEO). Ihe a bụ na ọ bụghị njikọ niile ejikọtara - ya bụ, isi engines ọchụchọ (dịka Google n'onwe ya, yana Yahoo na Bing) na-enyekwu aka ụfọdụ ụdị backlinks. N'etiti ndị ọzọ, backlinks dị na gburugburu ebe a na-ahụ maka ụlọ ọrụ azụmahịa gị ma ọ bụ blog ga-abụ njikọ kachasị mkpa dịka nnukwu ike maka nzube SEO - top design agencies.
Gịnị mere ha ji dị oké ọnụ?
Ya mere, ị bụ onye ziri ezi - a na-achọpụta na azụlinks gburugburu ebe obibi dị ugbu a dịka ezigbo ohere goldmine. Ụfọdụ ndị na-akpọ ha "Grail Nsọ nke SEO. "G in i mere ha ji nwee ekele nke ukwuu? Nanị n'ihi na ọ bụrụ na ị nọ n'etiti ndị chọrọ ka ebe nrụọrụ weebụ maọbụ blog nwee ike ịbawanye ama - ụdị njikọ a bụ kpọmkwem ihe dị gị mkpa inwe ọganihu dị otú ahụ dị ngwa.
Gini na - eme ka nsụgharị na - eme ihe site na nkọwa?
Ịtụle okwu nile nke Homelink Contextual Backlinks na ọnụ ọgụgụ, ka anyị gbalịa ịmepụta okwu site na okwu maka nghọta ka mma. Nke mbụ, Homepage bụ ibe weebụ pụrụ iche na-emeghe ụzọ iji chọpụta ọdịnaya na saịtị ọ bụla ma ọ bụ blog. Nke abuo, Afọ ojuju maka njikọ pụtara na a ghaghị ịchọta ha n'ime ọdịnaya nke ọdịnaya - nke pụtara na ihe odide ederede, ihe ndị na-agbanwe agbanwe na-ezighị ezi na-ahapụ ohere maka ndepụta ọ bụla spammy nke obere sidebars hụrụ n'ozuzu ya. Na nke atọ, backlink na SEO na-anọchite anya njikọ mpụga (ma ọ bụghị, njikọ inbound) dị na ibe weebụ ma ọ bụ blog ma na-arụtụ aka na ibe gị.
Olee otú ha si arụ ọrụ na Homepage?
Site n'echiche nke ịmalite SEO, backlinks na gburugburu ebe obibi na-abanye na ebe obibi bụ ndị kachasị dị irè na-ebugharị usoro nchịkọta nke weebụ ọ bụla ma ọ bụ blog maka nyocha ọchụchọ online. Ihe bụ na ihe ọ bụla gbasara arụmọrụ ha na SEO dị mfe - ihe ntụgharị backlinks na-adịkarị n'elu osisi gaa na Google, n'ihi na ha na-emekarị ka ha nwee ike ime ihe dị n'ime ihe ndị dị na ya.N'otu oge ahụ, eziokwu ahụ bụ na e mepụtara backlinks dị otú ahụ na ibe weebụ dị na saịtị ma ọ bụ blog na-enye ha ọbụna ibu ka ukwuu. Ntak-a? Nanị n'ihi na ị na-abanye na ebe obibi, ndị na-aga azụ azụ na-aga ịkwọ ụgbọala gị ọzọ - nke a bụ "ọnụ ụzọ" onye ọ bụla na-aga na weebụsaịtị ma ọ bụ blog iji nweta ọdịnaya na ibe ọ bụla.
N'ikpeazụ, buru n'uche na ihe niile gbasara ebe obibi ga-arụ ọrụ nanị maka ngalaba ndị dị ike na ibe weebụ yana nnukwu PR. M na-ekwu na ihe ọ bụla dị na backlink nwere ọtụtụ ihe dị arọ ọ bụghị naanị ebe ọ na-abịa ozugbo na homepage, mana n'ihi na mkpokọta weebụ (ma ọ bụ blog) bara uru nakwa. Ya mere, nke a bụ isi ihe dị mkpa iji nweta ihe ndị dị na azụlinklinks gị - otu ntinye aka ya n'onwe ya, ma ọ bụ ma eleghị anya, ebe nrụọrụ weebụ dum weere na ọnụ ọgụgụ? Abụọ!